6KU baaskiilada - BikesReviewed.com - aru-ua - dieselboss
6KU baaskiilada – BikesReviewed.com – aru-ua
Waa kuma 6KU?
6KU, oo ah mid ka mid ah saddexda nooc ee cusub ee shirkadda waalidka ee Avant Sports, ayaa la abuuray iyada oo laga jawaabayo baahida sii kordheysa ee loo qabo baaskiilada marsho go’an oo tayo sare leh oo qiimaheedu jaban yahay. Aasaasihii shirkadda, JW, waxa uu socdaalkiisa bilaabay 2012-kii, waxana uu ka niyad jabay tayada ay warshaduhu ku dhejiyeen naqshadahooda.
Halkii uu ka dhisi lahaa badeeco jilicsan, waxa uu go’aansaday in uu bilaabo dukaan u gaar ah si uu u awoodo in uu si buuxda u maamulo habka, tan iyo markaas wuxuu sameeyay seddex sadar, 6KU, Aventon iyo Populo Bikes.
Maanta hadafka shirkadda 6KU waxay ka tarjumaysaa qiyamkan asalka ah. Waxay ku bixiyaan baaskiilo qiimo jaban sababtoo ah iyagaa leh habka wax soo saarka waxayna aaminsan yihiin in «qof kastaa waa inuu haystaa baaskiilka isagoon lacag badan ku bixin».
6KU – Moodooyinka baaskiilka caanka ah
Iyadoo 6KU ay ka bilaabatay shirkad diiradda saaraysa baaskiilada hal-xawaaraha ah, 6KU waxay bixisaa noocyo kala duwan …
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Lexi Rivera Altura, Peso, Edad, Novio, Familia, Hechos, Biografía
Entrada siguienteSiguiente Requisitos del sistema de Black Mesa – Requirementsfor1.com